जानिराखौ, ढिला बिहे गर्दा महिलालाई यस्तो प्राण घातक रोग लाग्न सक्छ !::kamananews
जानिराखौ, ढिला बिहे गर्दा महिलालाई यस्तो प्राण घातक रोग लाग्न सक्छ !
काठमाडाैं । महिलामा स्तन क्यान्सरको विगविगि रहेका बेला डाक्टरहरुले नयाँ तथ्यको खुलासा गरेका छन् ।
प्राय महिलाहरु ढिला गरेर विवाह गर्दा उनीहरु स्तन क्यान्सर रोगबाट पीडित हुने गरेको भन्दै डाक्टरहरुले जनाएका छन् । क्यान्सर रोग विशेषज्ञ उत्सवमान श्रेष्ठका अनुसार महिलामा ३५-४० वर्षको उमेरमा क्यान्सरले समात्ने गरेको पाइएको छ ।
स्तनपान नगराउने, समयमै बिहे नगर्ने र स्तनमा गिर्खा देखा पर्दा (३५-४० बर्षको उमेरमा)सम्म स्वास्थ्य जाँच नगराउनाले समेत क्यान्सर पीडित हुने डा. श्रेष्ठको तर्क छ । बिहे र बच्चा समयमै जन्माएर राम्ररी स्तनपान गराउँदा क्यान्सर जस्तो प्राण घातक रोगबाट पीडित हुन नपर्ने समेत उनले जनाएका छन् ।
क्यान्सरको सुरुवाती अवस्थामा पत्ता लागेमा पूर्ण रुपमा उपचार हुने र महिलाहरु स्वस्थ्य अवस्थामा रहन सक्ने समेत उनले जनाएका छन् ।